အစိုးရသစ် သက်တမ်း နှစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနှင့် နိုင်ငံခြားသား စုစုပေါင်း ၆၈ဝ ကျော်ကို အမည်မည - Yangon Media Group
အစိုးရသစ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ၆၈၃ ဦးကို အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဥပဒေနှင့်အညီဖြေလျော့မှုများဖြင့် စိစစ်၍ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သည့်အမည်မည်းစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၈ဝ ဦး၊ နိုင်ငံ ခြားသား ၄ဝ၃ ဦးပါဝင်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ် ၃၅ အုပ်တို့ကိုလည်း အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မေ ၂၅ ရက်ကပြုလုပ်သည့် အစိုးရ၏ ဒုတိယ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ထားခဲ့သည်များ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ရှင်းလင်းချက် အရသိရသည်။
”အခုလက်ရှိမှာလည်း ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ အမည်မည်းစာရင်းတွေကို ကြိုတင်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့စနစ် [MA-PPS (Myanmar Advanced Passenger Processing Syst-em)] ကိုလည်းဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့တင်းတင်း ကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟုအလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအေးလွင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နှင့် အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများကိုလည်း အပြန်အလှန်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်သဘောတူညီချက်အား မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ အပါအဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံမှ သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင် ဆောင်ထားသူများကို ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသလို သာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် အပြန်အလှန်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်သဘောတူညီချက်ကို မလေးရှားနိုင်ငံမှအပ ကျန်အာဆီယံရှစ်နိုင်ငံနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
ဒီမိုကရေစီသွားရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲသည် ဟန်ပြမဟုတ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင??
မွန်ပြည်နယ်နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျေးရွာချောင်းကူးတံတားများ တည်ဆောက်ရန် ကန်ဒေါ်လာသ??